Grand Royal Group International (GRGI) - September, 2020 - Grand Royal Group International (GRGI) September, 2020 - Grand Royal Group International (GRGI)
GRGI has donated (550,000) units of surgical masks against Covid 19 in Myanmar
In order to support the efforts of COVID-19 prevention, control and treatment in the current outbreak situation, reflecting our Corporate motto “Being A Good Corporate Citizen”, Grand Royal Group International Co.,Ltd has donated (550,000) units of surgical masks to the Yangon Region Health Department, Yangon General Hospital, (9) townships under the care of Yangon Northern District, the venerable monks receiving treatment at Kyauktawgyi Monastery in Hmawbi Township and Rakhine State Health Department . Moreover, the company has donated the masks to ”the venerable monks under quarantine in Insein Township, Quarantine Centers in Alone Township, Thingyankyun Township,Thanlyin Township and other places in need urgently through “We Love Yangon”,”We Love Thanlyin”, local NGO.
Grand Royal Group International Co.,ltd has donated 200,000 bottles of “Good Corporate Citizen” Hand Sanitizer units (500 ml) to the state and regional health departments, Public Hospitals, Government offices serving public sectors, Covid-19 Committees, Quarantine Centers and other various organizations under the guidance of Ministry of Health and Sport quickly and efficiently for the COVID-19 prevention, control and treatment since March 2020.
Grand Royal Group International Co.,Ltd သည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်‌ရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင် (၉) မြို့နယ်၊ မှော်ဘီမြို့နယ် ကျောက်တော်ကြီးဓမ္မာရုံတွင် Positive လက္ခဏာဖြင့် ကုသမှုခံယူနေသော သံဃာတော်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနနှင့် We Love Yangon၊ We Love Thanlyin တို့က တစ်ဆင့် ယခုလက်ရှိ အင်းစိန်မြို့နယ် Quarantine ဝင်နေသော သံဃာတော်များ၊ အလုံမြို့နယ်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သန်လျင်မြို့နယ်များရှိ Quarantine Centerများနှင့် အခြားလိုအပ်လျက်ရှိသော နေရာများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် နှားခေါင်းစည်း (Surgical Masks) အရေအတွက် စုစုပေါင်း (၅၅၀,၀၀၀) ခုကို GRGI ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည့် “တာဝန်ကျေပွန်သော နိုင်ငံ့သားကောင်းဖြစ်‌ရေး” နှင့်အညီပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဖြစ် ပါသည်။
Grand Royal Group International Co.,Ltd သည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်း ချုပ်‌ရေးအတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လပိုင်းက စတင်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီး ကြပ်လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူကာ နိုင်ငံ့သားကောင်း အမှတ်တံဆိပ် လက်သန့်ဆေးရည် (၅၀၀ မီလီ လီတာ) ပမာဏပါရှိသော လက်သန့်ဆေးရည်ဗူးပေါင်း (၂၀၀,၀၀၀) ထုတ်လုပ်ပြီး အရေးတကြီး လိုအပ်သော ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးတွင်ရှိ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနများ၊ ပြည်သူ့ ဆေးရုံ ကြီးများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများ၊ COVID-19 ကော်မတီများ၊ Quarantine Center များနှင့် အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများသို့ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
Grand Royal Group International Co.,Ltd supported against COVID-19 in Rakhine State
Grand Royal Group International Co.,ltd donated 200,000 bottles of “Good Corporate Citizen” Hand Sanitizer units (500 ml) to the state and regional health departments, Public Hospitals, Government offices, Covid-19 Committees, Quarantine Centers and other various organizations under the guidance of Ministry of Health and Sport into the hands of people in need quickly and efficiently for the COVID-19 prevention, control and treatment started from March 2020.
For the COVID-19 prevention, control and treatment in the current outbreak situation, GRGI donated and delivered 3,800 bottles of Hand Sanitizer units to Rakhine State Health Department on 18 Aug 2020. For the next step of donation in Rakhine State, GRGI is planning to provide 100,000 boxes of surgical masks in line with our corporate motto “Being A Good Corporate Citizen”.
Grand Royal Group International Co.,Ltd သည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်‌ရေး အတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လပိုင်းက စတင်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်မှု ကို ခံယူကာ နိုင်ငံ့သားကောင်း အမှတ်တံဆိပ် လက်သန့်ဆေးရည် (၅၀၀ မီလီလီတာ) ပမာဏပါရှိသော လက်သန့်ဆေးရည်ဗူးပေါင်း (၂၀၀,၀၀၀) ထုတ်လုပ်ပြီး အရေးတစ်ကြီးလိုအပ်သော ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးတွင်ရှိ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနများ၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများ၊ COVID-19 ကော်မတီ များ၊ Quarantine Center များနှင့် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ယခုလက်ရှိအခြေအနေအရ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေး အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါရန် လက်သန့်ဆေးရည် ဗူးပေါင်း (၃,၈၀၀) ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ၊ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ GRGI ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည့် “တာဝန်ကျေပွန်သော နိုင်ငံ့သားကောင်းဖြစ်‌ရေး” နှင့်အညီ နှာခေါင်းစည်း (Surgical Mask) ပေါင်း (၁) သိန်းကို လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ လှူဒါန်းပေးပို့နိုင်ရန် စီစဥ်လျှက်ရှိပါကြောင်း ထပ်မံသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။
Best Company to Work in Myanmar 2020
Grand Royal Group International Co.,Ltd is proud to announce that the company has been awarded as one of the winners of “Best Companies to Work in Myanmar 2020, BCIM” powered by Job Net Myanmar Co.,Ltd. BCIM isa100% online program of Employee Engagement Survey within3months window and it aims to gainabetter insight of employee satisfaction level and provide measures to benchmark companies against the rest of the market in Myanmar. GRGI has participated for the first time in this BCIM 2020 program in order to witness the strengthening of the company branding as both an employer andabusiness mutually. This is one of the milestone accomplishments of GRGI in this COVID-19 pandemic situation, taking challenges in 2020.
Job Net Myanmar Co.,Ltd က ကြီးမှူးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် “မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ (Best Companies to Work in Myanmar 2020, BCIM) ဆု” ပေးအပ်ချီးမြှင့်ရာတွင် Grand Royal Group International Co.,Ltd သည်လည်း ဆုရကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ BCIM သည် (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူမှုနည်းစနစ်ဖြင့် ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများကို (၃) လတာ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၄င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဝန်ထမ်းများ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိခြင်းအဆင့်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံစျေးကွက်အတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီများ၏ အမှတ်တံဆိပ်အားကောင်းမှုကို တိုင်းတာစိစစ်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ GRGI အနေဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကဏ္ဍနှစ်ရပ်လုံးတွင် အပြန်အလှန် အားကောင်းမှုရှိသော ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းကို သက်သေပြနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကာ ပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါအန္တရာယ် အခြေအနေ ဆိုးများဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် ကာလအတွင်း ယခုကဲ့သို့ အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းမှာ GRGI ကုမ္ပဏီ၏ သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။
Posted on September 1, 2020 October 5, 2020
Mid-Season Championship Hantharwaddy United F.C.
Grand Royal Group International’s own football club, Hantharwady United F.C. played against Yangon United F.C. in MPT Myanmar National League 2020, week 11 match held at Thuwanna Stadium on 26 Aug 2020. In that match, Hantharwaddy United F.C. defeated the opposing team (3-1) and ranked as place No 1 with 24 points in total. GRGI is proud to congratulate Hantharwaddy United F.C. to beamid-season champion for the very first time in the history of the club.
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့၊ သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပခဲ့သည့် MPT Myanmar National League ပြိုင်ပွဲ၊ ပွဲစဉ် (၁၁) တွင် GRGI ၏ ကိုယ်ပိုင်ဘောလုံးအသင်းဖြစ်သော ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်အသင်း သည် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းနှင့် အကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ ကြပါသည်။ ထိုပွဲစဉ်တွင် ဟံသာဝတီယူနိုက်တက် အသင်း က ပြိုင်ဖက်အသင်း အား (၃) ဂိုး၊ (၁) ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး၊ MNL ပွဲစဉ် (၁၁) အပြီးတွင် ရမှတ်ပေါင်း (၂၄) ဖြင့် အဆင့်နံပါတ် (၁) နေရာတွင် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ဟံသာဝတီအသင်း၏ သမိုင်းသက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ရာသီဝက် ချန်ပီယံအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ခြင်းအပေါ် Grand Royal Group International Co.,Ltd က အထူးဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။